8 Faa'iidooyinka Soy Lecithin Powder Suuragal ah - Kiimikada Shangke
8 Faa'iidooyinka Soy Lecithin Powder Suurtagal ah
Caan ka ahaanshaha socithin soy-ga ah ayaa ku faafay adduunka oo dhan sida dabka duurjoogta ah, layaabna ma leh kordhinta iibka socithin soy-ga ah. Lecithin waa erey guud oo loola jeedo xeryo kala duwan oo dufan ah oo si dabiici ah looga helo dhirta iyo sidoo kale unugyada xayawaanka. Ka sokow wanaajinta maqaarka cuntada, lecithin ayaa sidoo kale caan ku ah awoodda ay u leedahay inay kordhiso nolosha shelf ee waxyaabaha kala duwan ee cuntada sida saliidda karinta iyo dharka saladhka.
Markii hore, lecithin waxaa laga soo saaray beedka York, laakiin waqti la qaatay, ilo kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin suufka loo yaqaan 'cottonseed', cunnada badda, soybeanska, digirta kelyaha, digirta madow, caano, gabbaldayaha iyo galleyda, ayaa la aqoonsaday. Kuwaas waxaa ka mid ah, soybeansku waxay ka mid yihiin ilaha ugu qanisan ee lecithin, tanina waxay noo keentaa socithin soy.
Waa maxay Soy Lecithin?
Cuntada soy ee loo yaqaan 'soy lecithin' waa nooc lecithin ah oo laga keenay soybeans ceeriin ah iyadoo la isticmaalayo walxaha kiimikada sida hexane. Ka dib, soo saarista saliidda waxaa loo farsameeyaa in laga soo saaro lecithin waxyaabaha kale ka soo baxa markaas kadib, qalajinta lecithin ayaa dhaca. Waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu daro waxyaabaha cuntada lagu daro ee hadda ka jira suuqa.
Budada socithin soy waxaa loo isticmaalaa sida caadiga ah iyo sidoo kale bakhaarada cuntada caafimaadka inay yihiin wax soo saar cunno ah si kor loogu qaado caafimaadka macaamiisha. Kaabitaannada laga sameeyay budada socithin soy ayaa bixiya tiro badan oo ah faa'iidooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin yareynta kolestaroolka. Tani waa sababta oo ah kor u qaadida sare ee phosphatidylcholine iyo waxa ku jira phosphatidylserine. Labadan fosfooraska waxay ku yimaadaan si waxtar leh daaweynta jirka ee bini-aadamka jirka, iyo howlaha kale.
8 Faa'iidooyinka Soy Lecithin ee Suuragalnimada ah
Sidii aan horayba u soo sheegnay, lecithin soy wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, kuwa ugu waaweynina waa:
Kolestaroolka aad u tiro badan ee jirka bini’aadamka wuxuu soo jiitaa dhowr halis caafimaad, midka ugu daran ee ah kordhinta u nuglaanta wadne qabadka. Nasiib wanaag, cilmi-baarayaashu wax ka qabashada nafaqada soy ee lecithin waxay ogaadeen in soyithka lecithin budada ama soy-ga kaabashku ay ka caawin karaan beerka inay soo saaraan tiro aad u sarreeya oo ah lipoprotein-ka (HDL), kaas oo sidoo kale loo yaqaanno "fiican" kolesterol.
Marka heerarka HDL ay kordhaan, kolestaroolka xun (liitprotein-hooseeya) ayaa yaraada. Waxaa jira siyaabo kale oo qofku ku yarayn karo heerka kolestaroolka jirkiisa, laakiin qaadashada kaabsoocyo soytiin ah, caano socithin ama cunno muujinaya budada socithin budada ah waa mid ka mid ah dawooyinka dabiiciga ah ee ugu waxtarka badan.
Daraasad ayaa la sameeyay si loo qiimeeyo saameynta nafaqada soy lecithin ee dadka qaba hypercholesterolemia (heerka kolestaroolka aad u sareysa ee dhiigga) .Dhaqaatiirta ayaa xustay in soytiiniyada soy maalin kasta ay ku darsadaan qaadashada (qiyaastii 17 milligram maalin kasta) waxay sababtay 41 wadarta kolestaroolka hoos u dhaca hypercholesterolemia hal bil kadib.
Isla mar ahaantaana, heerka Kolestaroolka LDL ayaa hoos u dhacay 42% iyo 56 boqolkiiba laba bilood ka dib. Tani waxay soo jeedineysaa in soytiiniyada soy-ka ah ee joogtada ah ee la qaato ay noqon karto daawo wax ku ool ah hypercholesterolemia.
2.Samee lecithin iyo kahortaga kansarka naasaha
Sida lagu xusay daraasad cilmiyeedka Epidemiology Journal 2011 ee diirada lagu saarayay soyciyada loo yaqaan 'socithin' iyo kahortaga kansarka naasaha, isticmaalka dheeraadka lecithin ayaa loo aanayn karaa hoos u dhaca halista kansarka naasaha Baarayaasha waxaay cadeeyeen in hoos udhaca xaaladaha kansarka naasaha ee dumarka postmenopausal-ka ah ee cunay suppletka lecithin-ka gudahooda mudadii tijaabada lagu jiray.
Waxaa la tuhunsan yahay inay suurtogal tahay yareynta kansarka sababta oo ah soyithka loo yaqaan 'soy lecithin' wuxuu ka kooban yahay fosfidylylline. Markaad dheefshiido, phosphatidylcholine waxay isu bedeshaa choline oo door muhiim ah ka ciyaara yareynta halista kansarka.
Si kastaba ha noqotee, lecithin soy iyo baaritaan kansarka naasaha ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo haddii runtii, socithin soy ay noqon karto daaweyn dabiici ah oo wax ku ool ah kansarka naasaha.
3. Gargaarka loo yaqaan 'colitis colitis'
Cudurka loo yaqaan 'unlcerative colitis', cudurka caloosha ee ku dhaca mindhicirka oo lagu garto habka dheef shiidka ee dheefshiidka caabuqa, wuxuu xanuun badan u geystaa dhibanayaasheeda. Nasiib wanaagse, kuwa qaatay koontaroolka soy ee lecithin waxay la kulmaan xasillooni weyn oo calaamadaha cudurka ah.
Markay soytiinku ay kordhiso xiidanka, waxay bakhtiisaa, iyada oo abuureysa caqabad ku haysa xiidmaha xiidmaha oo ay hagaajiso xabkeeda. Carrabku wuxuu ka ilaaliyaa xiidanka infekshinka bakteeriyada wuxuuna gacan ka geystaa habka dheefshiidka oo si wanaagsan loo helo.
Si ka sii wanaagsan, cilmibaadhistu waxay muujineysaa in maadada fosfoolka loo yaqaan 'phosphatidylcholine' ee budada socithin budada ah ay yareyn karto caabuqa la xiriira ulcerative colitis. Tan waxaa sii dheer soo celinta xayndaabka xab ee cudurka uu baabi'iyey.
4.Shaqaaqa culeyska jirka iyo maskaxda
Soy lecithin wuxuu ka kooban yahay fosfididylserine, phospholipid muhiim ah oo caan ku ah inuu saameyn ku yeesho hormoonnada walbahaarka. Gaar ahaan, cilmi-baarayaashu waxay u maleynayaan in isku-dhafka 'phosphatidylserine' ay ku shaqeeyaan fosfididic acid (oo ay ku jirto soy lecithin sidoo kale) si ay u soo bandhigaan saameyn walaac leh oo yaraynaysa jirka bini aadamka. Natiijo ahaan, hal daraasad ayaa soo jeedisay in socithin soy ay noqon karto daaweyn dabiici ah xaaladaha caafimaad ee la xiriira walaaca.
Intaa waxaa sii dheer, natiijooyinka daraasad la sameeyay 2011 oo lagu soo bandhigay joornaalka American Journal of Clinical Nutrition waxay soo jeedineysaa in dadka sare qaadashada choline (oo ay ku jiraan macaamiisha soy-ga ah ee caadiga ah) waxay la kulmayaan heerar culeys maskaxeed iyo maskaxeed oo hooseeya. Sidaa darteed, waxay leeyihiin waxqabadka xusuusta oo ka wanaagsan iyo saamaynta jahawareerka oo yaraada.
Markii loo qaato sida lagu taliyay, kaabsooyinka socithin-ka ee loo yaqaan 'soy lecithin' waxay hagaajin karaan maqaarkaaga maqaarkaaga. Waa daaweyn dabiici ah oo wax ku ool ah canbaarta iyo finanka, oo ay ugu mahadsan tahay dhismaheeda hawleed. Layaab ma laha layaabka soyithka soy ee loo yaqaan 'soy lecithin' waa shey muhiim u ah alaabta daryeelka maqaarka.
6.Ka hortagga xasaanadda
Daraasadaha lagu sameeyay xayawaannada si loo qiimeeyo saameynta soy lecithin waxay muujisay inay sare u qaadi karto shaqada kahortagga. Soy maalinle ah supplements lecithin ka caawin unugyada dhiiga cad ee dagaalka ay kula jiraan cudurada ku dhaca wareega dhiiga.
7. Calaamadaha xasilloonida
Sababta oo ah maadada 'choline' ee aadka u sarreeya, socithin soy ayaa ka qeybqaata isgaarsiinta wanaagsan ee ka dhexeysa maskaxda aadanaha iyo xubnaha kale ee jirka. Tani waa sababta oo ah choline waa wakiilka fure u ah wada xiriirka. Sidaas oo ay tahay, dadka waallida qaba ayaa si weyn uga faa'iideysan kara soc lexithin haddii ay ku dhex daraan qorshahooda cuntada ee maalinlaha ah.
8.Maxsanaanta calaamadaha gargaarka
Daraasado fara badan ayaa muujinaya in soyka lecithin qaadashada dheeraadka ahi ay bixin karto calaamadaha manopause astaamaha. Gaar ahaan, waxaa la helay in kor loo qaado xoogga, wanaajinta adkaanta halbowlaha jirka iyo in la keeno heerarka cadaadiska dhiigga heerka caadiga ah ee haweenka caadada ka dhalata.
Daraasad la sameeyay 2018, 96 haween ah oo da'doodu u dhaxayso 40 ilaa 60 ayaa loo isticmaalay sidii muunad cilmi baaris ah oo lagu ogaanayo haddii soytiinyada lecithin-ka ay awood u leeyihiin inay horumariyaan astaamaha daalka ee haweenka ku dhaca caadada haweenka. Qaarkood waxaa la saaray nidaamka socithin soy-ga ah halka inta kalena loo saaray placebo.
Muddadii tijaabada ka dib, cilmi baadhayaashu waxay ogaadeen in dumarka qaata koorsada soy-ga ah ee loo yaqaan 'soy lecithin supplement' ay leeyihiin ciriiri xagga halbowlaha ah iyo dhiig karka marka la barbar dhigo kooxda 'placebo'. Sidoo kale, astaamihi hore ee daalku wuxuu ahaa calaamadaha gargaarka, laakiin taasi kuma dhicin kooxda 'placebo'.
Sidee lecithinku u shaqeeyaa?
Sida phospholipids kale, molecule lecithin waxay ku milmayaan biyo laakiin saliid. Si kastaba ha noqotee, haddii biyo lagu qaso saliida, moleekuleelka ayaa sidoo kale ku milmi doona walxahaas. Xaqiiqdii, waxaa sida caadiga ah laga helaa iskudhafyada ay kujiraan biyaha iyo saliida, gaar ahaan halka ay unugyada biyuhu ay xuduuda u lee yihiin moodeelka saliida. Meelaha noocaas ah, aashitada dufanka leh waxay la xiriiraan saliida iyo kooxaha fosfooraska biyo.
Sidaas awgeeda, lecithin emulsify waxay awood u leedahay inay sameysato gaashaamo yar yar oo ilaalin ah oo ku xeeran dhibcaha saliida, sidaa darteed saliida biyaha ku daadisaa. Kooxaha fosfooraska ee soo jiitay biyaha ayaa u oggolaanaya dhibcaha saliidda ee, duruufaha caadiga ah, weligood kuma jiri karaan biyaha, inay ku sii jiraan biyaha muddo dheer. Tani waxay sharraxaysaa sababta u-labisashada majones iyo saladhka uma kala saaraan qaybo kala duwan oo saliid ah iyo biyo ah.
Saamaynta soy ee lecithin iyo halista
Isticmaalka socithin soy waxay sababi kartaa waxyeelo soy lecithin khafiif ah. Waxyeelooyinka caadiga ah ee socithin socithin waxaa ka mid ah:
Calool dhiig leh
Kalluumaysiga oo kordha
Miyuu keenaa xasaasiyado soy?
Haddii jirkaagu si aad ah uga falcelinayo soy-dka, waxaad ku yeelan kartaa xasaasiyad soy marka aad gasho socithin soy. Marka, waxaa lagugula talinayaa inaad la tashatid takhtarkaaga daryeelka caafimaad haddii aad la kulanto xasaasiyad soybean ah ka hor intaadan bilaabin qaadashada caanaha socithin, soyithka lecithin ee waxyaabaha kale ee cuntada ka kooban. socithin soy.
Marka, xasaasiyadda soy ayaa sidoo kale ka mid ah dhibaatooyinka suurtagalka ah ee socithin-ka ee lecithin. Si kastaba ha noqotee, waxay dhacdaa oo keliya munaasabadaha dhif ah.
Ma jiraa wax xiriir ah oo ka dhexeeya heerarka socithin-ka iyo heerarka estrogen ee jirkaaga?
Waxaa jiray walaac laga qabo muranka ku saabsan xiriirka ka dhexeeya soyith-ka socithin iyo heerarka estrogen ee jirka aadanaha. Dadka qaar ayaa sheeganaya in isticmaalka socithin soy uu carqaladeyn karo soosaarka caadiga ah ee qanjirka tayroodh iyo hormoonnada endocrine. Sababtoo ah, carqaladayntu waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan oo ay ku jiraan arrimaha caadada.
Si kastaba ha noqotee, mowqifka dhabta ahi waa inaanu jirin caddayn saynis ah oo muujineysa in jidhka bini-aadamka uu u isticmaali karo "estrogen plant" iskiis. Lecithin estrogen-ka ayaa kaliya saameyn ku yeelan kara howlaha firfircoonida qofka haddii ay ka timaado isha xoolaha. Daraasad ay sameysay Thorne Research ayaa taageerta mawqifkan. Natiijooyinka ka soo baxay cilmi-baaristu waxay muujinayaan in soy iyo soy-soo-saarku aysan sababin arrimaha estrogenic-ga ee aadanaha.
Sidaa daraadeed, majiro wax xiriir ah oo ka dhexeeya soyith-ka socithin iyo heerarka estrogen ee jirka aadanaha.
Sidee loo Qaataa Dheeraynta Soy Lecithin?
Kaabsiyada socithin soy ee loo yaqaan 'soc leinith lecithin' waxaa laga heli karaa qaabab kaladuwan oo ay ka mid yihiin kareemada socithin kaabsoosha, kaniiniyada socithin soy, leyith lecithin soy, leyith lecithin dareeraha iyo granules soy lecithin.
Sax qiyaasta socithin soy waa qaraabo qof ilaa qof kale. Tan waxaa ugu wacan iyadoo ay kuxirantahay arrimo kala duwan sida xaalada guud ee caafimaadka iyo da'da macaamilka.
Waxaa xusid mudan in aysan jirin caddeyn ku filan oo saynis ah oo muujineysa qiyaasta saxda ah ee lecithin taasi oo amaan u ah xaalad gaar ah. Si kastaba ha noqotee, kiisaska intooda badan, qiyaasta qaadashadu waxay u dhexaysaa 500mg ilaa 2,000mg, laakiin waxaa muhiim ah inaad la tashatid bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga si aad u xaqiijiso qiyaasta daawada kuugu fiican.
In kasta oo aysan tani qasab ahayn, waxaa lagugula talinayaa inaad soytiin kaabayaasha socithin ka qaadato cunto.
Budada socithin soy ayaa isticmaasha
budada socithin soy waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin:
Emulsification: Soosaarayaasha cuntada iyo waxyaalaha la isku qurxiyo waxeey ka dhigaan socithin soy iibsadaan inay u isticmaalaan budada soodiyamka lecithin sida emulsifier ama wakiilka kororka geedi socodka wax soo saarkooda.
Is qurxinta iyo ilaalinta cuntada: marka lagu daro agabka cuntada sida shukulaatada, xabadaha, subagga lowska, cuntooyinka la dubay iyo saladhida dharka ama waxyaabaha la isku qurxiyo (samaysashada, shaambooyinka, qaboojiyeyaasha maqaarka, maydhka jirka ama bushimaha bushimaha) budada socithin budada waxay u adeegtaa wax ilaalin khafiif ah, oo ay ku dheereeyaan noloshooda shelf. .
Dadka qaar waxay samaystaan ​​socithin soyith ah oo iibsada si ay u isticmaalaan lecithin si ay u xafidaan waxyaabaha la isku qurxiyo ee guriga lagu sameeyo iyo waxyaabaha cuntada laga sameeyo.
Kordhinta Choline: Dad badan ayaa sameeya socithin soy iibsan sababta oo ah waxay ka warqabaan in soyka lecithin budada ah ay tahay isha hodanka ku ah. Hal ama laba qaado oo budada ah waxaad ku dul dulsaari kartaa smoothie, casiir, caano fadhi, siiriyaal, oatmeal ama cunto kasta ama cabitaan aad jeceshahay maalin kasta.
Kordhintaani waxay kuusoo bandhigaysaa faa'iidooyin caafimaad. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah khatarta kansarka naasaha oo hooseeya, dheefshiidka oo fiicnaada, naas nuujin aan xanuun lahayn, caafimaadka maskaxda oo ka fiican, calaamadaha jahawareerka iyo kahortag difaac, iyo qaar kale.
soyalecitin iyo Miisaanka Maansada
Lecithin wuxuu u shaqeeyaa sida gubashada dabiiciga ah iyo sunta jirka ee jirka bini aadamka. Waxyaabaha loo yaqaan 'choline content' ee lecithin waxay baabi'isaa dufanka jirka ku ururay, taasoo kor u qaadeysa tayada dheef-shiid kiimikaadka ee beerka. Sidaas oo kale, jidhku wuxuu awoodaa inuu gubiyo dufanka badan iyo dufanka kalooriga, sidaa awgeed miisaanka oo yaraada.
Intaa waxaa sii dheer, cilmi baaris ayaa soo jeedisay in dadka qaata lecithin-ka ay la kulmaan waxqabad jireed oo wanaagsan iyo adkeysi marka loo eego kuwa aan qabin. Sidaa darteed, dheeri ah lecithin, qofku wuxuu awoodaa inuu sifiican wax uga qabto oo muddo dheer, isagoo kiciya culeys badan.
Halkee u Soo Iibsado Soy Lecithin
Ma ka yaaban tahay socithin soy lebis ah oo wax laga iibsado? Haddii aad internetka ka raadiso, waxaad ogaan doontaa inay jiraan ilo badan oo aad ka samayn karto iibsiga soy lecithin guntin haddii aad rabto soy lecithin iibin. Si kastaba ha noqotee, waa inaad sameysaa dadaallo macquul ah si aad u xaqiijiso daacadnimada iibiyaha si aad u hubiso in tirada soy lecithin ee aad iibsato runtii tahay run. Ha aaminin qof kasta oo sheeganaya inuu leeyahay lecithin soy iib ah haddii aadan rabin inaad ku dhacdo gacanta been-abuurka ama iibiyayaasha been-abuurka ah. U tag iibiye liisan leh oo shati leh.
Isticmaalka socithin soy waa badan yihiin faa iidooyinkiisuna wey ka badan yihiin halista ka imaan karta iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira isticmaalka socithin soy. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaasha socithin soy waa inay raacaan tallooyinka lagu taliyey ee kaabista si ay uga helaan waxa ugu fiican. Ka sokow, markasta oo ay rabaan inay sameyaan lecithin soy iibsan isticmaalkooda ama ganacsigooda, mid waa inuu hubiyaa inuu ka helo il aamin ah.
Chung, C., Sher, A., Rousset, P., Decker, EA, & McClements, DJ (2017). Qaabeynta emulsions-ka cuntada iyadoo la adeegsanayo emulsifiers dabiiciga ah: Adeegsiga quillaja saponin iyo socithin soy si loo been abuuro kafeega dareeraha ah. Journal of Cuntada injineernimada, 209, 1-11.
Hirose, A., Terauchi, M., Osaka, Y., Akiyoshi, M., Kato, K., & Miyasaka, N. (2018). Saamaynta socithin soy ee daalka iyo astaamaha menopausal ee haweenka da'da dhexe ah: baaritaan aan kala go 'lahayn, laba indhoole ah, daraasad xakameysan. Joornaalka nafaqada, 17(1), 4.
Oke, M., Yacquub, JK, & Paliyath, G. (2010). Saamaynta ay leedahay lecithin soy ee kor u qaadida tayada miraha / maraqa. Cilmiga caalamiga ah ee cilmi baarista cuntada, 43(1), 232-240.
Yokota, D., Moraes, M., & Pinho, SCD (2012). Tilmaamidda liposomiyada loo yaqaan 'lyophilized liposomes' oo laga soo saaray socithin soy oo aan daahir ahayn: daraasad kiis oo ah kiimikada 'casein hydrolyzate microencapsulation'. Joornaalka joornaaliistaha ah ee injineerinka kiimikada, 29(2), 325-335.
Züge, LCB, Haminiuk, CWI, Maciel, GM, Silveira, JLM, & de Paula Scheer, A. (2013). Musiibo ka-hortagga iyo dhaqan-diimeedyada soyithka ee socithin iyo cuncunnada ku-saleysan ee Tween 80. Journal of injineernimada cuntada, 116(1), 72-77.